4:01 pm, आइतबार, मंसिर १, २०७६
मारुती सुजुकीको नेपालको लागि आधिकारीक विक्रेता सिजी मोटोकर्पले नेपाली बजारमा आफ्नो पछिल्लो उत्पादन एस–प्रेसो सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको एस–प्रेसोको विभिन्न पक्षमा सिजी मोटोपर्कपका कार्यकारी निर्देशक करण चोधरीसँग मेरोअटोले यसको बजारीकरण, बिक्री लगायत विविध पक्षमा गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
विक्रीमा आइरहेको लगातारको गिरावटमा पनि नयाँ मोडल ल्याउँदै हुनुहुन्छ । नयाँ मोडलबाट कत्तिको उत्साहीत हुनुहुन्छ ?
अहिले बजारमा गिरावट आएको छ भनेर चुपलागेर बस्ने अवस्था होइन । कसरी अटोमोवाइल सेक्टरलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला यही हो । मेरो व्यक्तिगत र हाम्रो कम्पनी यही सोचाई लिएर अगाडि बढ्ने हुँदा नयाँ प्रडक्ट निरन्तररुपमा ल्याई रहेका छौं । अवस्य पनि नयाँ प्रडक्टले केही मुभमेन्ट दिन्छ नै । हरेक मानिसले नयाँ उत्पादन चाहिरहेका हुन्छन् । सुजुकी जहिल्यै नयाँ गर्न रुचाउने कम्पनी हो । त्यहि अनुसार हामीपनि अगाडि बढी रहेका हुन्छौ ।
जहाँसम्म एस–प्रेसोको कुरा छ, यसको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको मूल्य र एसयूभीको फिल हो । सुरुवाति मूल्य २२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा एस–प्रेसोको बिक्री सुरु भएको छ । त्यसैले हामीले यसको ट्यागलाईन नै ‘माई फस्ट एसयूभी’ राखेका छौं । नेपालको बाटोको कन्डिसन र गाडीको मूल्य अनुसार यो उत्कृष्ट मिनि एसयूभी हो । हाम्रा सबै सडकको अवस्था राम्रो छैन । यहाँ उच्च ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएका गाडीको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले सुजुकीले यसको पूर्ति गरेको छ ।
एस–प्रेसोलाई हामीले नाडा अटो शोमा नै हामीले बुकिङ लिएका थियौ । यतिका लामो समय ग्राहकहरुले कुरेर सहयोग गरिदिनु भयो । आज हामीले नेपालभर रहेका हाम्रा ३६ वटै डिलर नेटवर्कबाट यसलाई बिक्री सुरु गरिसकेका छौं ।
अल्टो र सेलेरियोको बीचमा यसलाई राखेर ल्याएजस्तो देखिन्छ । खासमा यसको पोजिसिनिङ चाहिँ कहाँ हो ?
हामीले यी दुईको बीचको होइन ब्रेजाको मुनिको प्रडक्टको रुपमा यसलाई लिएका छौं । यसको बनोट धेरैहदसम्म ब्रेजाको जस्तो रहेको छ । कम्पनीले यसलाई भारतमा पनि ब्रेजाको मुनी नै प्लेसिङ गरेकाले यसले अल्टो र सेलेरियोको बजारमा खासै फरक पार्दैन । यसलाई एसयूभी प्रबेशको पहिलो खुड्किलोको रुपमा हामीले लिएका छौं ।
उमेर समूहमा जाँदा कुन समूहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ?
जो आफुलाई युवा सम्झनु हुन्छ ति सबै एस–प्रेसोको ग्राहक हुनुहुन्छ र हाम्रो प्राथमिकता पनि युवाहरु नै हो ।
पछिल्लो दुई महिना ६ वटा नयाँ मोडल ल्याउनु भयो ? अटोबजार नै विमारी भएको बेलामा ल्याइएका नयाँ मोडलको पर्फमेन्स कस्तो छ ?
विगत तीन वर्ष अगाडि मैले निकै ठूलो उत्साहको साथ मारुती सुजुकीको एसक्रस बजारमा उतारेको थिए । त्यो तीन वर्षमा जति बिक्री भएको थियो अहिले यस्तो अवस्थामा ल्याएको एसक्रसले तीन महिनामा त्योभन्दा धेरै यूनिट बिक्री भएको छ । यसलाई कसरी हेर्ने । त्यसैले नयाँ मोडलले बजारमा नयाँ सिनर्जी प्रदान गर्ने विषयमा दुईमत हुन सक्दैन ।
पछिल्ला तीन महिनामा बलेनो, आर्टिगा, सियाज, एसक्रस, एक्सएल ६ र एस–प्रेसोलाई बजारमा ल्याएका छौं । मलाई विश्वास छ मिनि एसयूभीको रुपमा र सस्तो मूल्यको कारण एस–प्रेसोले युवाहरुलाई आफुतर्फ तान्न सक्छ ।
उपत्यका र उपत्यका बाहिर एस–प्रेसोको बिक्री रणनीति फरक हुन्छ वा एउटै हुन्छ ?
हामीले नेपालको सबै कुनामा एउटै किसिमले यसलाई बिक्री गर्ने रणनीति तयार गरेका छौं । यसमा हाम्रोतर्फबाट कुनै किसिमको फरक हुँदैन ।
नेपाली बजारमा यसको प्रतिस्पर्धा कुनसँग हुने देख्नु भएको छ ?
नेपालमा सुजुकीको प्रतिस्पर्धी सुजुकी नै हो । त्यसमा पनि मिनि एसयूभीको रुपमा यसको प्रतिस्पर्धी अन्य ब्राण्डसँग छैन । स्पेक अनुसार हेर्ने हो भने महिन्द्रा केयूभी १०० र रेनो क्वीडसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनिरहेका छन् । तर, नेपालमा सुजुकीको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धी सुजुकी नै हो ।